Paschim Nepal News | पाँच वर्षे योजना बनाएको छु, देखिनेगरी काम गर्छु : उम्मेदवार भट्ट
पाँच वर्षे योजना बनाएको छु, देखिनेगरी काम गर्छु : उम्मेदवार भट्ट
सोमबार २६, बैशाख २०७९ ०७:३८ पवन जोशी
महेन्द्रनगर : विद्यार्थी राजनितिबाट राजनितिक यात्रा शुरु गरेका ३८ बर्षिय युवा हुन्, विनोद प्रसाद भट्ट । समाजवादी र माओवादीबिच भएको गठबन्धनबाट भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. १७ को अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । २०७४ को स्थानिय तहको चुनावमा एमालेबाट लडेका सदस्य पदमा झिनो मतान्तरले पराजित भएका उनि पुनः जनताको सेवा गर्ने उदेश्यले चुनावी मैदानमा छन् । उनि बाल जागृति कलेज महेन्द्रनगरका प्राध्यापक एवं गोदावरी होटल म्यानेजमेन्टकका प्रिन्सिपल समेत हुन । के छन त वडा बनाउने उहाँका योजना यस पश्चिम नेपाल डटकमका सवाददाता पवन जोशीसंग गरिएको कुराकानीको सम्वादित अश ।
१) चुनावी एजेण्डाहरु के–के छन्, वडाको विकासका लागि के योजना छ ?
चुनावी एजेण्डा भन्दापनि व्यवहारमा लागु गर्ने खालको योजना मैले बनाएको छु । म पाँच बर्षे योजना बनाएर जनतामाझ चुनावी दौडमा छु । वडालाई सम्वृद्ध बनाउन समय दिएर काम गर्नेछु ।
२) वडाको विकासका लागि के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ त ?
हाम्रो वडा कृषि र पशुपन्छी पालनका लागि पोकेट क्षेत्रमा परेको वडा हो वडा नं. १७, मैले यसका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नेछु । ५० जना युवालाई युवा उदमसिलता तालिम दिएर रोजगारीको सृजना गराउनेछु । यो क्षेत्र प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना (धान जोन)को क्षेत्रपनि भएकोले कृषिको आधुनिकीकरण गरि रोजगारीका अवसरहरु सृजना गराउने कार्ययोजना बनाएको छु ।
विभिन्न समय र विद्यामा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ, नसामुक्त वडा घोषणा गरि कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । प्रत्येक बर्षमा चोकमा एक चौतारो निर्माण गरिनेछ, शहरी विकास आयोजनामा परेका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धीत निकायमा पहल गरिनेछ । चोक–चोकमा फ्रि वाईफाई, चोकहरुमा सिसिटीभि क्यामरा जडान, सामुदायीक ईलाईब्रेरी निर्माण गरिनेछ ।
वषौंदेखि अस्तव्यस्त रहेको सिचाई प्रणालिलाई व्यवस्थीत गरिनेछ, गन्धानालालाई व्यवस्थीत गरिनेछ । साताव्यापी सरसफाई अभियान शुरु गरिनेछ, पुल पुलेसा र कलपट निर्माण तथा नयाँ ट्रेक खोल्ने कार्य गरिनेछ, व्यवसायीहरुसंगको सहकार्यमा बाख्रा, कुखुरा तथा माछाको बजारीकरणका लागि मिटमाट सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
यसैगरी मझगाउँ क्षेत्रमा तरकारी र बासखेडाको खल्ला क्षेत्रमा धानबालि लगाउन प्रोत्साहन गर्न अनुदान वितरण गरिनेछ, स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थीत गरिनेछ, कृषि र भेटनरी सेवालाई वडाबाटै प्रदान गर्न पहल गरिनेछ, नजिकका सबै वडालाई पायक पर्ने ठाउँमा वर्थिङ्ग सेन्टर र टोलटोलमा मासिक रुपमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाईनेछ, विद्यालयहरुमा महिनाको एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । विद्युतका पोल तथा लाईन, सडकबत्तीलाई व्यवस्थीत गरिनेछ । सहकारी तथा संघसंस्थासंगको सहकार्यमा दुग्ध चिस्यान तथा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका योजना छन् ।
३) वडाका समस्या के हुन् ? समाधानका लागि के योजना बनानुभएको छ ?
वडाका समस्या भनेका माथी मैले योजनामा आईसकेका छन् । यीँ कार्यहरु सम्पन्न गर्न मैले जितेभने सम्पुर्ण पार्टीका अग्रजहरु, बुद्धीजिवीहरु, शिक्षक एवं समग्र वडाबासीसंगको छलफल र सहयोगमा कामहरु अगाडी बढाउनेछु ।
४) तपाईको मुख्य प्रतिष्पर्धी को हो ?
वडाबासीले भोट दिन्छन् र म अत्यधीक मतले जित्छु भन्नेमा म बिश्वस्त छु, पार्टीगत रुपमा भन्नुपर्दा मेरो प्रतिस्पर्धा भनेको काँग्रेस संग हुन्छ ।
५) अन्तीममा मतदाताहरुलाई केही भन्नु छ की ?
मतदाताहरुलाई बिचलित नभएर मनपरेको र विकासगर्न सक्षम उम्मेदवारलाई भोट दिएर जिताउन अनुरोध गर्दछु । म आफैमा सशक्त उम्मेदवार भएर खडा भएको छु , पाँच बर्षे काययोजना बनाएर फिल्डमा आएको छु, म यो मेरो योजनालाई सफल बनाउन चाहान्छु जनताले मलाई विश्वास गरेर भोट हाल्नेमा म ढुक्क छु । जनताले दिएको भोटको अपमान म हुन दिने छैन, जनतालाई मलाई भोट दिएर सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछु । हाम्रो हैन राम्रोलाई रोज्न सम्पुर्ण मतदातालाई अनुरोध गर्दछु ।